Assange oo qodbad jeediyey axadii - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Assange oo qodbad jeediyey axadii
La daabacay måndag 20 augusti 2012 kl 13.53
Maalintii axadii waxaa qodbad ka jeediyey banaanka daarada safaarda Ecuador Julian Assange oo halkaa in mudo ah magagalyo ahaan ugu sugan. Assange ma uusan sheegin sida oo uga badbaadayo in loo soo gacan galiyo dalka Sweden, laakiin waxa uu u mahad naqay dadka mareykanka, ingriiska iyo weliba Sweden ee gacanta taageero u fidiyey,inkastoo aysan dowladdahooda taageerin.
Waxa uu sidoo kale u mahad naqay wadamada latinamerika ee kulmay si ay difaacaan go'aanka Ecuador ay magangalyada ku siisay.
Assange ayaa ugu baaqay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama in ay sameyso " waxa kaliya ee xaqa ah" taas oo ah in Mareykanka joojiyo ugaarsiga Wikileak iyo dadyowga macluumadka u soo gudbinaya Wikileak aan dacwado lagu soo oogin. Waxa uu sidoo kale Mareykanka ka dalbaday sii daayo askarigii loo xiray in uu macluumaad u gudbiyey Wikileak, Bradley Manning.
As'aasaha Wikileak Julian Assange ayaa loo haystaa tuhun ah kufsi iyo xad gudub galmo oo uu ka geystay dalkaan Sweden. Maxkmada sare ee Ingriiska ayaa go'aan ku soo saartay in Assange loo soo gacan geliyo Sweden si waraysi loo lagala yeesha arinta kufisiga iyo xad gudubka galmo ee lagu eedeeyey.
Laakiin Assange ayaa ka cabsi qaba in Sweden ay u gacan geliso dalka Mareykanka oo naftiisa qatar gasho.